डक्टरका अक्षर ~ brazesh
May 21, 2014 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
डाक्टरका अक्षरहरूका बारेमा थुप्रै हास्यास्पद प्रसंग फेला पर्छन्। तर, यो सुन्दा हाँसोउठ्दो प्रसंग भए पनि यसका पछाडि एउटा गम्भीर पक्ष पनि लुकेको छ। हुन पनि हो, डाक्टरहरूको अक्षर बुझ्न वास्तवमै अत्यन्त कठिन हुन्छ। यस स्तम्भकारले पनि अहिलेसम्म कुनै पनि डाक्टरको स्पष्ट बुझिने प्रेस्त्रिmप्सन देखेको छैन। मानौँ, उनीहरू कसले सबैभन्दा अस्पष्ट र छरपस्ट अक्षर लेख्न सक्छ भन्ने अदृश्य प्रतियोगितामा भाग लिइरहेेका हुन्छन्। बिरामीका लागि जीवनदान दिने औषधीजस्तो संवेदनशील कुरा लेख्ने अक्षर किन त्यस्तो हुन्छ? यसको परण्िााम कस्तो हुन्छ? यसका नकारात्मक पक्ष केसम्म हुन सक्छन्?
त्यस्त अधिकांश पसलमा स्वीकृति पाएका मानिस बस्दैनन्। ऊ आफ्ना अरू काममा लागेर श्रीमान्, श्रीमती, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजु, भाइ, साथी वा कर्मचारीको भरमा पसल चलाइरहेका उदाहरण हरेक टोलमा देख्न पाइन्छ। एक त डाक्टरको अक्सर नबुझिने अक्षर, त्यसमाथि तालिम नलिएका मान्छे। त्यति हुँदाहुँदै पनि औषधी ग्राहकले मागेको भरमा बिनाप्रेस्त्रिmप्सन बेचिन्छ। पसलेले आफँै पनि डाक्टरसरह जिज्ञासुहरूलाई औषधी दिइरहेका हुन्छन्, मानिसहरूले लिइरहेका हुन्छन्। यस विषयमा पनि अनुगमन र कडाइ आवश्यक छैन र? हामी त अरू धेरै कुरामा जस्तै यसमा पनि आँखा चिम्म गरेर पशुपतिनाथको भरमा बसेका छौँ।
दुवै कुरालाई नकार्न नसकिए पनि मानिसको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा यस्तो जुवा खेल्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि आफ्नै ठाउँमा टड्कारो छ। यसको एउटा एकदमै साधारण समाधान हुन सक्छ। डाक्टरले पि्रन्टेड प्रेस्त्रिmप्सन मात्र दिने। प्रविधिले यति ठूलो फड्को मारेको युगमा सानातिना डिपार्टमेन्टल स्टोरले त पि्रन्टेड बिल दिन सक्छन् भने डाक्टरले ल्यापटप वा डेस्कटप प्रयोग गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन। विश्वका थुप्रै मुलुकमा यो अनिवार्य भइसकेको छ र उनीहरूले यसलाई व्यावहारकि प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्।
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा यो त्यति सहज नहुन सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा कमसे कम औषधीको नाम र सेवन गर्ने तरकिा सबै 'क्यापिटल लेटर' -ठूला अक्षर)मा मात्र लेख्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ। केही दिन अभ्यास हुने हो भने त्यसरी पनि त्यति नै छिटो अक्षर लेख्न सकिन्छ। त्यति सानो प्रयासले मानिसको जीवनमा नै असर गर्ने कुरामा सुधार हुन सक्छ भने त्यो किन नगर्ने ?